Guddiga doorashooyinka oo tababarqaadan doona | KEYDMEDIA ONLINE
Guddiga doorashooyinka oo tababarqaadan doona
Guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo kan xallinta khilaafaadka ayaa lagu wadaa in tababar loo furo kahor inta aysan billaaban doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga doorashooyinka ee dhawaan lasoo gudbiyay magacyadooda ayaa lagu wadaa in loo furo tababar qaadan doona muddo 4 maalin ah oo ka billaaban doonta 27 bishan Juun kuna eg 30 Juun 2021.
Abuukaate Cumar Dhagey oo ka mid ah Xubnaha kooxda Farsamada Arrimaha Doorashooyinka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa faahfaahiyay jadwalka iyo nooca tababarka ay qaadanayaan Xubnaha Guddiyada doorashooyinka, ka hor inta aysan guda galin howlaha doorashada.
Abuukaataha ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in guddiyada kala duwan ee ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka dhammaantoo lasiin doono tababar, maadaama shaqada la qabanayo ay tahay howl adag una baahan in si caddaalad ah loo qabto, iyadoo ay kamid tahay heshiiskii May lagu gaaray in dalka la gaarsiiyo doorasho Xor iyo Xalaal ah, mas'uuliyadna la isaga saaro sidii arrintaasi loo fulin lahaa.
Waxaa kale ee uu sheegay Abuukaate Cumar dhagey in waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo tababarayo ay kamid tahay qorsha howleedka doorashada, oo ah in la baro sida ay doorashadu usoconeyso maalinta koowaad ilaa xildhibaanka ugu dambeeya laga soo dooranayo.
"Waxaa la bari doonaa waxyaabaha hagaayo doorashada, maadaama doorashadani aysan ahayn doorasho sharci lagu hagaayo oo ay tahay doorasho lagu hagaayo heshiis, waa in ay bartaan heshiisyadaas sida heshiiskii 17-ka September 2020, heshiiskii 26-ka September ee Golaha Shacabku u ogolaaday in dalku aado doorasho dadban, iyo kii ugu dambeeyay ee 27-kii May lagu gaaray magaalada Muqdisho" ayuu yiri Abuukaate Cumar dhagey oo kamida xubnaha kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka.
Guddiga ayaa lagu war galiyay in la xareyn doono 24 Juun si 27 -ka uu ugu billowdo tababarkan.